ဒီနေ့မှာ (၁၃) နှစ်ပြည့်တဲ့တူတော်မောင်နဲ့များ ချိန်းထားသလားလို့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ဆိုလာတဲ့ ရန်အောင် - Cele Gabar
ဒီနေ့မှာ (၁၃) နှစ်ပြည့်တဲ့တူတော်မောင်နဲ့များ ချိန်းထားသလားလို့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ဆိုလာတဲ့ ရန်အောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မနက်(၉)နာရီ (၂၇)မိနစ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး လက်ရှိသြစတေးလျနိုင်ငံမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဦးဇင်းကိတ္ထိသာရကတော့ သက်တော်(၇၃) နှစ်မှာပဲ ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းကျော်ဟိန်းရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းအတွက် ရုပ်ရှင်လောကတစ်ခုလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီး အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်ကလည်း သူ့ရင်ထဲကခံစားချက်တချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
“ရုပ်ရှင်လောကရဲ့မြင်းမိုရ်တောင်ကြီး ပြိုပါပကောလားဗျာ…. ရှိနေစေချင်သေးတယ်.. တွေ့ဆုံချင်နေသေးတယ်.. စကားတွေပြောချင်နေသေးတယ်..တရားတွေနာချင်နေသေးတယ်… ရုပ်ရှင်မှာ မြင်ဆရာ သင်ဆရာဖြစ်သလို အားကျ အတုယူ စံထားရတဲ့သူ အပြီးအပိုင် ထွက်သွားပြီတဲ့လား… ဒီတခါ တကယ် အပြတ်ဖြတ်သွားပြီပေါ့… ပူဆွေးလွန်းရပါတယ်… နှမြောတသချင်းလွန်စွာဖြစ်ရပါတယ်.. ဒီနေ့မှာ (၁၃) နှစ်ပြည့်တဲ့ တူတော်မောင်နဲ့ ချိန်းများထားသလားထင်ရအောင် တိုက်ဆိုင်နေတာကလည်း ဘယ်တော့မှ မေ့မရတော့ပါဘူးဘယ်တော့မှ မမေ့ တော့ပါဘူး.. ဦးဇင်းကြီး(ဦးကျော်ဟိန်း)…. နောက်ခန္ဓာအသစ်မှာပြည့်စုံ စွာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ် ကိုငြိမ်းချမ်းစွာရောက်တဲ့ အကျင့်ထူး အသိထူး သတိထူးတွေ ရရှိကျင့်ကြံနိုင်ပါစေခင်ဗျာ” ဆိုပြီးဝမ်းနည်းဖွယ် မျှဝေရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ ကျော်ဟိန်းရဲ့ တူဖြစ်သူ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားဒွေးသေဆုံးတာ (၁၃) နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်လွန်းစွာ တစ်ရက်ထဲမှာ ဦးဇင်းဘဝကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ ဦးဇင်းကျော်ဟိန်းကိုတော့ တမလွန်က တူတော်မောင်နဲ့များ ချိန်းထားသလားဆိုပြီး ရန်အောင်ကတော့ စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – Yan Aung
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Dway, Kyaw Hein, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, yan aung, ကျော်ဟိန်း, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, ဒွေး, မြန်မာဆယ်လီ, ရန်အောင်
Previous post ကန်တော်ကြီးကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးတဲ့တောသားလေးပါ ဆိုတဲ့ တန်ခွန်ကျော်
Next post ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က အမိုက်စားရိုက်ချက်တွေနဲ့ လန်းလွန်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တဲ့ မထက်